Amanqaku kaRitesh Patil Martech Zone |
Amanqaku ngu URitesh Patil
URitesh Patil ngumseki weqela IMobisoft Infotech elinceda ukuqala kunye namashishini kwitekhnoloji yeselfowuni. Uyayithanda itekhnoloji, ngakumbi itekhnoloji yeselfowuni. Uyiblogger enomdla kwaye ubhala kwisicelo esiselfowuni. Usebenza kwinkampani yophuhliso lwe-android ekhokelayo kunye nabaphuhlisi abanesakhono be-android abaphuhlise usetyenziso olushukumayo kumacandelo ahlukeneyo anje ngezeMali, i-Inshurensi, iMpilo, Ukuzonwabisa, ukuvelisa, oNobangela bezeNtlalo, ezeMfundo nezinye ezininzi kwaye ufumene amabhaso amaninzi ngokufanayo.
Izizathu ezi-10 eziphambili zokwakha iwebhusayithi yakho ngeWordPress
Ngeshishini elitsha, nonke nikulungele ukungena kwintengiso kodwa inye into engekhoyo, iwebhusayithi. Ishishini linokuqaqambisa uphawu lwalo kwaye ngokukhawuleza libonise amaxabiso abo kubathengi ngoncedo lwewebhusayithi enomtsalane. Ukuba newebhusayithi enkulu enomtsalane kufuneka kule mihla. Kodwa zeziphi iindlela onokukhetha kuzo ukwakha iwebhusayithi? Ukuba ungusomashishini okanye ufuna ukwakha usetyenziso lwakho okokuqala